Orinasa sy mpanamboatra Mirror beveled China | LYDGLASS
Ny fitaratra beveled dia manondro fitaratra izay voakapa sy voakilabola amin'ny zoro sy habeany manokana mba hamoahana endrika kanto sy mirindra. Mamelatra ny vera manify manodidina ny sisin'ny fitaratra.
Inona no atao hoe bevel eo amin'ny fitaratra?
A fitaratra beveled manondro a fitaratra izay voakapa sy voakilaka amin'ny sisiny sy habeany manokana ny sisiny mba hamoronana endrika kanto sy mirindra. Io dingana io dia mamela ny vera mahia manenjana ny sisin'ny fitaratra.
Tahaka ny ahoana ny fitaratra misy sisiny beveled?
A fitaratra beveled manondro a fitaratra misy izany sisiny tapahina sy nohosorana amin'ny zoro sy habe manokana mba hamokarana kanto sy mirindra jereo. ... Manana slant (na bevel) sahabo ho iray santimetatra ny sakany sisiny hisambotra ny jiro - mamorona sary mahaliana mahaliana.
Ny sisin'ny beveled dia endri-javatra mahazatra amin'ny fitaratra sy ny takelaka am-baravarankely, manome endrika voalalotra sy kanto kokoa. Satria manome eritreritra toy ny endriny ireo sisiny beveled, dia ho maivana kokoa ny fitaratra anao raha tsy misy fefy mavesatra milanja azy. Azonao atao koa ny mividy fitaratra beveled namboarina mba hifanaraka amin'ny volanao.
Ahoana no ahalalanao fa tsara ny fitaratra?
Amin'ny kalitaon'ny vera, ataovy izay hahazoana antoka fa tsy mifanohitra ny vera ary tsy manodikodina ny taratra. Ny vera dia tokony hanana fisaka fisaka. Ny fitaratra ho an'ny trano dia misy hatevin'ny 1/8, 3/16 ary 1/4 santimetatra. Manolo-kevitra ny hanana fitaratra misy hatevin'ny 1/4-inch, satria tsy hanodinkodina ireo taratra izany
Teo aloha: Varavarana sauna feno vera 8mm fotsy volo
Manaraka: 5mm fitaratra milamina mazava ho an'ny fonosana fonenana Aluminium sy ny kofehy
Antique Mirror Bevel
Fitaratra fitaratra fitaratra beveled
vokatra fitaratra beveled
Mirror Oval Beveled
Mirror amin'ny rindrina beveled
Mirror Edge Bevelled